काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘नेपाल–इण्डिया फ्रेन्चाइज इन्भेस्टमेन्ट एक्सो एण्ड कन्क्लेभ’ को आज काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको, नीतिगत सुधारसमेत गरेको तथा उच्च प्रतिफल र सुरक्षाका समेत प्रबन्ध गरेकाले लगानीका लागि नेपाल सुगम गन्तव्य भएको बताउनुभयो ।
नेपाल यतिखेर विदेशी प्रविधि र लगानीलाई भित्र्याएर आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नेक्रममा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्नुभयो, “हामीले कानूनी व्यवस्थामा आमूल सुधार गरेका छौँ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र समेत सञ्चालनमा आइसकेको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानून समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।”
संसारभर नै लगानीका लागि प्रसिद्ध भइसकेको फ्रेन्चाइज लगानीका लागि समेत नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने अर्थमन्त्रीको जोड थियो ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सेवामूलक उद्योगमा समेत लगानी विस्तार गर्ने सुगम अवसर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको पर्यटन उद्योगमा निजीक्षेत्रको ठूलो मात्रामा लगानी रहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले हरेक वर्ष पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएकाले थप लगानी विस्तार गर्न निजीक्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले निकट भविष्यमा नै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानूनसमेत ल्याउने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्नुभयो, “बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा र ‘प्याटेन्ट राइट’ का विषयमा समेत सरकार गम्भीर छ । बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ र गरिन्छ ।”
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालका पर्यटन, उद्योग, अस्पताल, होटल लगायत क्षेत्र लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएकाले भारतीय लगानीकर्तालाई लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“नेपालमा हाल दुई तिहाइको बलियो र स्थिर सरकार छ, सरकारको एकमात्रै नारा आर्थिक समृद्धि हो, प्रधानमन्त्रीले त्यसैमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । सरकारले सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर जाने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ”, अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन पनि व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मेलामा व्यापारिक सोच र अवसरका बारेमा समेत जानकारी दिने लक्ष्यका साथ विभिन्न ४७ कक्ष रहेका छन् ।